ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ Stocks | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ Stocks
ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ Stocks – ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ – ခရီးသွားလာရေးစတော့ – ခရီးသွားစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရီးသွားနှင့်ရထားခရီးသွားလုပ်ငန်း၌ရှိသောကြောင့်ဤသည်မှာပုံမှန်စာမျက်နှာမဟုတ်ပါ, ငါတို့ဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတက်ကြွတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ဒါ့အပြင်ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှပ်နှံနိုင်ပြီးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ရဲ့အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် ခရီးသွားခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကို ဒီခရီးသွားစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများသည်.
အောက်ဖော်ပြပါခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်သည့်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါသည်, ဒီစာမျက်နှာကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သူတို့၏ပရိုဖိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို, နှင့်ရည်မှန်းချက်များ, အရာနောက်ဆုံးမှာအမြတ်အစွန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအောင်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်.
ခရီးသွားလာ Stocks ဇယား
အဘယ်အရာကိုခရီးသွားစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများမှဒေတာဘာတန်ဖိုးရှိသည်, သင်သည်သူတို့၏သမိုင်းဝင်ဖျော်ဖြေပွဲမမြင်ရလျှင်, ဒီတော့ဒီမှာအထက်ပါထိတ်သင်္ကေတအားလုံးဖြစ်ကြသည်, ယခုကုမ္ပဏီနှုန်းနှင့်သင်္ကေတနှုန်းနှုန်းသမိုင်းဇယား၌တည်၏.
ဒေတာကောင်းတယ်, သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်မပါဘဲအချက်အလက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း, ဒီတော့ဒီမှာစတော့အိတ်ချိန်းသတင်းပို့စနစ်များနှင့်လွတ်လပ်သောသတင်းဌာနများနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ခရီးသွားစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများရဲ့သတင်းများဟာဒီမှာပါ. ဤသည်မှာရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာဖြစ်သည်:
Booking Holdings ကစတော့ရှယ်ယာ
Expedia Group မှစတော့ရှယ်ယာသတင်း
AirBnB Inc စတော့အိတ်သတင်း
Trip.com (Ctrip) အုပ်စုစတော့ရှယ်ယာသတင်းများ
ပွဲတော် Cruise စတော့အိတ်သတင်း
Ryanair Holdings စတော့ရှယ်ယာသတင်း
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်းအခြားစျေးကွက်ညွန်းကိန်းများသည်လည်းလွှမ်းမိုးသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဒီတိုတောင်းသောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်မျြးအခနျးကွီးကိုပြင်ဆင်ကြ၏, ဒါကြောင့်သင်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့အဓိကစတော့အိတ်ချိန်းညွှန်းကိန်းများအပြင်ငါတို့ပေးခဲ့သောအခြားကြီးမားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်.
BKNG – ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးခရီးသွားကုမ္ပဏီဖြစ်သည်, ကျနော်တို့ Booking Holdings ကအပေါ်အီရန်ဖြစ်ကြသည် (BKNG).
EXPE – Covid19 ကာလအတွင်းလူအများအပြားကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုသည်ပျက်စီးလွယ်သည်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင် Expedia Group မှာသဘာဝပါပဲ (EXPE).
ABNB – တကယ်ပဲအဘိုးပြတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်, Airbnb အတွက်မှန်ကန်သောတန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (ABNB) Booking Group ၏တန်ဖိုး၏ထက်ဝက်ဖြစ်သင့်သည် (BKNG)
မတ် – အဘို့ 2021 ကျနော်တို့ Marriott အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်အီရန်ဖြစ်ကြသည် (MAR သင်္ကေတ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်.
ခရီးစဉ် – TripAdvisor သည်၎င်း၏ဝင်ငွေပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည်, ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်, ငါတို့မူကား၊.
TCOM – ဒါက Ctrip ပေးထား (TCOM) တရုတ်ပထမ ဦး ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်, သူတို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လာခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်, သို့သော်, TRIP အုပ်စုတွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လာခြင်းကိုနှစ်သက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းများလည်းရှိသည်, ဒါ bullish.
MMYT – MakeMyTrip နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခက်ခဲသည်, တရုတ်ရဲ့တင်းမာမှု၏, ဒါပေမယ့်အပြုသဘောဘက်မှာ, အိန္ဒိယ၏စီးပွားရေးကိုကောင်းတစ် ဦး အသွင်သဏ္ဌာန်၌တည်ရှိ၏နှင့်အလွန်ကောင်းသော post ကို Covid19 ဖြစ်သင့်သည်.
CCL – Carnival Cruise ၏ပထမ ဦး ဆုံးသင်္ဘောသည်ကမ်းခြေသို့မရောက်မီပြန်လည်ရောက်ရှိသည်နှင့်အမျှမြင့်တက်လာလိမ့်မည်, ဒီနေ့မဝေးဘူး, ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် CCL တွင်သဘာဝကျသည်.
RCL – Royal Carribian သည် Carnival Cruise နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်’ ရလဒ်များနှင့်ဆင်တူသည်, သို့သော်, RCL အပေါ်ထောက် CCL ထက်လျော့နည်းသည်, ဒါပေမယ့်ဒီမှာပဲ Royal Caribbean မှာသဘာဝရှိနေဆဲပါ.
Rya – Ryanair သည် Budget လေကြောင်းလိုင်း၏အကြီးဆုံးလျှင်မဟုတ်ပါ, အဖြစ်မကြာမီဥရောပကန့်သတ်ဖယ်ရှားပစ်ကြသည်, ဒီစတော့ရှယ်ယာအလွန်မြင့်မားသွားပါလိမ့်မယ်, အခုတောင်မှ, ဤ RYA စတော့ရှယ်ယာသည်သင်၏အစုစုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်, အချစ်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Save A Train စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောဘုံမေးခွန်းတစ်ခုရသည်, Save A Train သည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ရထားလက်မှတ်တွေက်ဘ်ဆိုက်, ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာလည်းသီးခြားဘလော့ဂ်အပိုင်းရှိတယ်, အရာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ထို့အပြင်ခရီးသွားလာရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသာမြှင့်တင်ပေးရန်သာဖြစ်သည်.
ယခုတွင်သင်သည်ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ၏တန်ဖိုးနှင့်စတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှုမြင်ပြီ, ဒီဟာကခရီးသွားခြင်းကိုတားဆီးဖို့မလိုပါဘူး, ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲ, ကျေးဇူးပြု။ ရွေးချယ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save. ရထားခရီးသွားလာဘို့သင့်က်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-companies-stocks%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / က de အတွက် / ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.